Meesho: Earn Money Online using Work from Home App 6.5.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.5.4 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Meesho: Earn Money Online using Work from Home App
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ငွေအွန်လိုင်းရယူနိုင်သောတစ်ခု App ကိုရှာဖွေနေပါသလား
သို့မဟုတ် App ကိုနေအိမ် မှစ. အလုပ်သလော
သို့မဟုတ်တစ် Reseller App ကိုလက်ကားစျေးနှုန်းများမှာထုတ်ကုန်ပြန်လည်ရောင်းချရန်သလော
သင့်ရဲ့ WhatsApp ကိုနှင့် Facebook အုပ်စုများအတွက် Meesho ရဲ့လက္ကားစျေးနှုန်းထုတ်ကုန် (ဥပမာ surat sarees, Kurtis, ဝတ်စုံ, လက်ဝတ်ရတနာ, အလှအပထုတ်ကုန်) မျှဝေခြင်းစတင်ပါ။
မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင် & ရောင်းအားပစ်မှတ်တွေ့ဆုံအပေါ်တစ်ဦးတိုင်းအမိန့်အပေါ်အမြတ် margin နှင့်အပတ်စဉ်ငွေသားဆုကြေးငွေဆုလာဘ်နှင့်အတူကော်မရှင်ရယူနိုင်သော။
ဟုတ်ပါတယ်, Meesho နှင့်အတူနေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေဖြင့်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံဝင်ငွေကြောင်းရိုးရှင်းပါသည်။
ကျနော်တို့ Meesho နှင့်အတူပိုက်ဆံဝင်ငွေထက်ပိုမို 1 ကုဋေ Reseller များအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ # 1 အိန္ဒိယတွင် Reseller App ကိုဖြစ်ကြသည်။ Meesho App ကိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေ, အိမ်ရှင်မ, ကောလိပ်ကျောင်းသားများ, ဆိုင်နှင့် Boutique ပိုင်ရှင်တွေ, လှ, လက်ကားကုန်သည်များ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအခြိနျပိုငျးအလုပ်ရှာနေမည်သူမဆိုအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ငွေအွန်လိုင်း Make ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေမူလစာမျက်နှာထံမှအလုပ်ရှာဘို့အကောင်းဆုံးသုညရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု App ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဝင်ငွေကော်မရှင်, profit margin နှင့်အပတ်စဉ်ငွေသားဆုကြေးငွေဆုလာဘ်ဒါလွယ်ကူသောခဲ့ဖူးဘူး။
3 လွယ်ကူရှင်းလင်းခြေလှမ်းအတွက် MEESHO နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဘယ်လိုစတင်သလဲ:
1. Browse ကို: Meesho App ကို Install & သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ sign up ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များလက္ကားထုတ်ကုန် (ဥပမာ Kurtis, surat sarees) Browse ။ ဒါ့အပြင်ဓါတ်ပုံတွေ & catalog အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူ (ဥပမာလက်ဝတ်ရတနာ, အလှအပထုတ်ကုန်) ထုတ်ကုန်အသစ်တွေအကြောင်းကိုပုံမှန်အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
2. ဝေမျှမယ်: သင့်ရဲ့ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစ်စုအပေါ်သင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်တည်ဆဲဖောက်သည်ကွန်ယက်ကိုအဲဒီကတ်တလောက် Share Instagram ကို & Facebook စာမျက်နှာ / အုပ်စုနှင့်အမိန့်တောင်းဆိုမှုများကိုရယူပါ။ Facebook အ Store နဲ့ WhatsApp ကိုအပေါ် selling Meesho ရဲ့ One-click နှိပ်ပြီးရှယ်ယာ option နဲ့အတူရိုးရှင်းတဲ့လုပ်လျက်ရှိသည်။
3. ရယူနိုင်သော: သင်တစ်ဦးမှာယူမှုတောင်းဆိုချက်အရပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်၌သင်တို့၏ဖောက်သည်ထံမှငွေပေးချေမှုစုဆောင်းနှင့်သင့်ကော်မရှင်ထည့်သွင်းပြီးနောက် Meesho App ကိုအပေါ်သူတို့၏ကိုယ်စားအမိန့်ထားပါ။ သငျသညျတိုင်းရောင်းချမှုအပေါ်တစ်ဦး profit margin ဆိုတာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Meesho နှင့်အတူဝင်ငွေ & ပိုပြီးအမိန့်အားမရသဖြင့်အပတ်စဉ်ငွေသားဆုကြေးငွေဆုလာဘ်ရနိုင်သည်။
MEESHO APP ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ 10 အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ရယူ
1. GET HIT အမျိုးအစားထုတ်ကုန်များ
Meesho ဖောက်သည်တွေနဲ့လူကြိုက်များစသည်တို့ကို Selfie kurtis, Pom အဘိဓါန် Pom Sarees, Surat Sarees, ပိုး Sarees, Jaipuri bedsheets, ပင်မစာမျက်နှာပုံစံမျိုး, အလှအပပစ္စည်းများ, ရတနာကဲ့သို့ထုတ်ကုန်များ, ယိရောင်းချသူကိုလက္ကားပေးသွင်းချိတ်ဆက်ပြီးငွေကြေးကိုအွန်လိုင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအတွက်ကူညီပေးသည်။
2. စျေးအပေါဆုံး GET
ကျနော်တို့ Meesho app ကိုအပေါ်ထုတ်ကုန်သေချာလက်ကားပေးသွင်း (ပြည်တွင်း & တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ) နှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်သူတို့ကို sourcing အားဖြင့်စက်ရုံစျေးနှုန်းများမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
3. အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ GET
4. လွယ်ကူ Return
လွယ်ကူသောပြန်လာ option နဲ့အတူပျော်ရွှင်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များထားပါ။
5. အကောင်းဆုံး customer support
သင်သည်မည်သည့်အမိန့်အားမရအကြောင်းကိုမေးမြန်းမှု, ထုတ်ကုန်, ရေကြောင်း, ပြန်အမ်းငွေ, ကော်မရှင်ပေးချေမှုအခြေအနေ, သို့မဟုတ်သင့် Reseller စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှဆက်စပ်ဘာမှဖြေရှင်း 080-61799600 ပေါ်မှာငါတို့ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကမခေါ်နိုင်ပါ။
Delivery ON 7. ငွေကြေး (ရေနံပေါင်းတင်)
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးငွေပေးချေမှု option ကိုအဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းအပေါ်ငွေသားကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်အရောင်းတိုးမြှင့်။ ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပေးပို့ကြသည်တစ်ချိန်ကငါတို့သည်သင်တို့၏ဘဏ်အကောင့်သို့သင့်ရဲ့ကော်မရှင်ငွေသွင်း။
8. Times ငွေပေးချေမှု
Meesho စီးပွားရေးအကယ်ဒမီအတွက်လူမှုရေးအရောင်းရဆုံးအပေါ်အကြံပေးချက်များနှင့်သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်အဆက်အသွယ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဖောက်သည်ကြှနျုပျတို့၏နာမညျကိုဖျောထုတျဘယ်တော့မှအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုံခြုံရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Misho, Mesho, Messo, Meeso, Miso, Messho, Meso, Meshoo, Messo ထောက်ပံ့ရေး, Meeshu, Meeshow ။
မည်သည့်မေးမြန်းချက် / တုံ့ပြန်ချက်အဘို့, help@meesho.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုစာရေးသို့မဟုတ် 080-61799600 အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို www.meesho.com ဖြစ်ပါသည်
www.facebook.com/meeshosupply: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App အား အခ်က္ျပပါ
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Meesho: Earn Money Online using Work from Home App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.5.4
ထုတ်လုပ်သူ Meesho Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.meesho.com/privacy
Release date: 2019-09-22 18:06:19
လက်မှတ် SHA1: 83:16:40:AE:79:4B:63:33:F4:90:39:18:75:F6:75:0C:48:D2:D5:A2
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Sanjeev Barnwal
အဖွဲ့အစည်း (O): FashNear
Meesho: Earn Money Online using Work from Home App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ